Vancouver waxay yeelan doontaa xafiis Apple goor dhow | Wararka IPhone
Kanada hadda waxay ku leedahay dhisme xafiis Toronto taas oo Apple ay ku leedahay dhowr shaqaalaheeda ah hadana markale waxaad moodaa in Apple qorshaynayso inay xafiisyo kale ka furato wadanka. Xaaladdan oo kale, waa dhisme wali dhismihiisu socdo laakiin dhawaan la dhammayn doono oo Apple ay dhawr dabaq ku sii hayn doonto xafiisyadeeda.
Dhismaha ama daaraha dhaadheer waa astaamo caan ah oo leh Naqshad qaab qaab jibbaarado asymmetrically ahaan la dhigay midba midka kale dushiisa, runtu waxay tahay inay tahay dhisme ku habboon in lagu rakibo xafiisyada Apple maaddaama ay ku taal meel wanaagsan magaalada Vancouver gudaheeda.
Shaki la'aan, naqshada dhismaha waa mid cajiib ah waxaana naqshadeeyay Michael Sypkens iyo Esteban Ochogavia oo ka socda OSO, Merrick Architecture. Waxaan dhihi karnaa Apple waxay shaqaalahaaga dejin lahaayeen dhowr dabaq dhismahan ama uguyaraan taasi waa waxa ay nooga sheegaan warbaahinta caanka ah Bloomberg. Runtu waxay tahay inay umuuqato dhismo aad u casri ah.
Waxay u muuqataa in shirkaddu qorsheyneyso inay ka degto iyaga guga sanadka soo socda. Ma wajahayno xog ay Apple xaqiijisay laakiin waxay umuuqataa inay tani ugu dambeyn noqon doonto kiiska. Koobka Cupertino waxay ku hayaan dhowr kun oo shaqaale ah oo loo kala qaybiyey wadamada kala duwan xafiisyo la mid ah kuwa ay kireysanayaan Kanada, sidaa darteed layaab ma noqon doonto haddii warkan dhowaan si rasmi ah loo xaqiijiyo, taas oo hadda si fudud loo xanto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Vancouver waxay yeelan doontaa xafiis Apple goor dhaw